ko htike's prosaic collection: ကြံတောသင်္ချိုင်းမှာ နာမ်နှိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်။
ကြံတောသင်္ချိုင်းမှာ နာမ်နှိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်။
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်ကတော့၊ မြန်မာစစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့၊ ကလိမ်ကျမှု၊ ဗြောင်လိမ်မှုတွေအောက်မှာ နစ်မြုတ်သွားခဲ့ရပါပြီ။ ပိုဆိုးတာကတော့၊ ထုံးစံအတိုင်း၊ ပေါကြောင်ကြောင်၊ မိစ္ဆာအယူဝါဒ၊ အယူသည်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံတဲ့၊ အစီအမံလုပ်ရပ်တွေနဲ့၊ မစ္စတာဘန်ကီ မွန်းကို၊ နာမ်နှိမ်ဘို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကို၊ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။
စစ်အာဏာသိမ်း၊ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာ၊ သင်္ချိုင်းတွေကို၊ ကြောက်လန့်ရွံရှာလေ့ရှိပါတယ်။ အမင်္ဂလာနေရာလို့ယူ ဆထားပြီး၊ မသွားမဖြစ်မှ၊ သွားလေ့ရှိကြပါတယ်။ စစ်အကြမ်းဖက်ဓါးပြခေါင်းဆောင် သန်းရွှေတယောက်၊ ခုချိန် ထိ၊အာဇာနည်ဗိမာန်တောင်သွားရောက်ရဲတဲ့၊ သတ္တိမရှိပါဘူး။ လွတ်လပ်ရေးအတွက်၊ အသက်ပေးဆောင်ရွက် ခဲ့တဲ့၊တပ်မတော်ဖခင်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို၊ အလေးပြုရမှာ၊လိပ်ပြာမသန့်လို့လား။ ဒါမှမဟုတ်၊အမင်္ဂလာ နေရာလို့ယူဆထားလို့လား။ ( ကြတ်ပြေးနေပြည်တော်ရှိ၊ စစ်အကြမ်းဖက်ရုံးချုပ်က၊ လူတွေအဆိုအရ၊ နှစ်ခုစ လုံးကြောင့်ပါတဲ့။ )
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းနဲ့၊ သံတမာန်တွေ၊ တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲကို၊ မူလကဆီဒိုးနားဟိုတယ်မှာ၊ ကျင်းပဘို့စီစဉ်ထား ပြီးမှ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ကမာရွက်မြို့နယ်၊ ဟံသာဝတီလမ်းနဲ့ ကျွန်းတောလမ်းထောင့်ရှိ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးပပျောက်ရေး အထိမ်းအမှတ်ပြတိုက်သို့၊ ပြောင်းရွှေ့ကျင်းပဘို့၊ အတင်းအကျပ်စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒိနေရာဟာ၊ယခင်က ကြံတောသင်္ချိုင်းလို့၊ လူသိများခဲ့တဲ့နေရာပါ။ အဲဒီပြတိုက်အတွင်းမှာ၊ လျှို့ဝှက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့၊ လူ(၅)ဦးကိုချုပ် နှောင်ထားတဲ့၊ အချုပ်ခန်း(၅)ခန်း၊ လျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာ၊ သိရှိသူ၊မရှိသလောက်ပါ။
ပြတိုက်အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ကို၊ ဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်း၊ ရှေ့ပေါက်ကဝင်ရောက်ခွင့်မပြုဘဲ၊ တခြား အပေါက်ကဝင်ရောက်ဘို့စီစဉ်ထားတာကြောင့်၊ မစ္စတာဘန်ကီမွန်း၊ အကြီးအကျယ်ဒေါသဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့၊ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့၊ သံတမာန်တွေနဲ့၊ မီဒီယာသမားတွေရှေ့မှာ၊ မစ္စတာဘန်ကီမွန်း ဟာ၊ သူတို့ခိုင်းသမျှလုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့၊ ပုံစံဖြစ်အောင်စီစဉ်ခဲ့ကြတာပါ။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေက၊ ရှေ့တခါးပေါက်မှဝင်ရောက်ခွင့်မပြုပါက၊ သံတမာန်များနှင့်၊တွေ့ဆုံရှင်း လင်းပွဲကို၊ ပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ဘဲ၊ လှည့်ပြန်မယ်လုပ်တော့မှ၊ စစ်အစိုးရတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များက၊ သဘောတူ ခွင့်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်လို၊ ထိပ်ဆုံးကခေါင်းဆောင် ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဟာ၊ သင်္ချိုင်းဟောင်းမှာပြု လုပ်လိုက်ရတာကြောင့်၊ နောင်ဘယ်သောအခါမှ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း၊အနေနဲ့၊မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သြဇာ သက်ရောက်နိုင်တော့မှာ၊ မဟုတ်တော့ဘူးလို့၊ ဗေဒင်ယတြာတွေကိုအ စွန်းရောက်ယုံကြည်နေကြတဲ့၊ စစ်အာ ဏာရှင်အုပ်စုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ၊ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
တကမ္ဘာလုံးကို၊ကိုယ်စားပြုတဲ့၊အဖွဲ့ကြီးရဲ့၊ ဦးစီးခေါင်းဆောင် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းအပေါ်၊ နာမ်နှိမ်ရန်ရည်ရွယ် ချက်ရှိရှိ၊ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပေမဲ့၊ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေက၊ အရာမရောက်ခဲ့ပါဘူး။ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းကို၊ ကြတ်ပြေးနေပြည်တော်ရောက်စဉ်၊လည့်လည်ပြသပြီး၊ ဧည့်ခံပွဲတွေကျင်းပပေးဘို့စီစဉ်ထား ကြပေမဲ့၊ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့၊ ရဲဝံ့ပြတ်သားတဲ့၊ ငြင်းပယ်မှုကြောင့်၊သူတို့အစီအစဉ်တွေဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။ “သူလာတာဟာ၊ဧည့်ခံပွဲတက်ရောက်ဘို့လာတာမဟုတ်ကြောင်း” ပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်၊ စစ်အာဏာရှင်အ ဖွဲ့အရှက်ကွဲခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကြတ်ပြေးနေပြည်တော်ကအပြန်၊ ရန်ကုန်မှာ၊မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကို၊ နာမ်နှိမ် ဘို့အရေးပေါ်စီစဉ်ခဲ့ကြတာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဘန်ကောက်မြို့သို့ရောက်ပြီး၊ လေယာဉ်ပေါ်မှဆင်းဆင်းခြင်း၊ သတင်းထောက်တဦးရဲ့အမေးကို၊ဖြေ ကြားရာမှာ၊ “ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့နှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ရာ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ထပ်တလဲလဲပြောကြားခဲ့ တဲ့စကားက၊ ၂၀၁၀မှာအရပ်သားအစိုးရကို၊အာဏာလွှဲပေးပါ့မယ်ဆိုတာပါဘဲ။ ပြီးတော့မှ မစ္စတာဘန်ကီမွန်း ဆက်ပြောသွားတာက၊ “နောက်တကြိမ်ထပ်တွေ့ရင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို၊ အရပ်သားအဖြစ်တွေ့ရလိမ့် မယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့။”
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်၊ မိမိဘဝကိုအနစ်နာခံဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့၊ လူထုခေါင်းဆောင်၊ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်၊ ထိမ်းသိမ်းခ၊ံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ တိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက်၊ အစွမ်းကုန်ကူညီရန်၊ ရည်ရွယ်ပြီးလာရောက် ခဲ့ပေမဲ့၊ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့၊ နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုမှုတွေအပေါ်၊ အရေးမထားတဲ့၊ စစ်အာဏာသိမ်းအ ဖွဲ့ရဲ့၊ အောက်တန်းကျတဲ့၊ လှည့်စားမှုတွေကြောင့်၊ အချိန်ကုန်ပင်ပန်းပြီး၊ အကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆရပေမဲ့၊ အမှန်တ ကယ်မှာတော့၊ မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်၊ အကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါကတော့၊ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့၊ အာဏာကိုလက်မလွှတ်ရအောင်၊ ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်၊ နိုင်ငံတကာမိသားစုတွေကို၊ အသုံးချပြီး၊လုပ်ဆောင်နေတာကို၊ မစ္စတာဘန်ကီမွန်း၊ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစား လိုက်ရတာကြောင့်ပါ။
Meeting in the Kyantaw old Cemetery for UN Secretary-General H.E.Mr.Ban Ki-Moon
As usual, United Nation Secretary-General H.E. Mr. Ban Ki-Moon second trip to Burma was play out again by Burmese Junta as all Mr. Ban’s hopes were sunk into Junta’s tricks, shameless lies and further more and worst of all, was attacked by superstitious and Satanic heresy practice. Mr. Ban Ki-Moon was attacked by occult mean to cause misfortune to him.
Most of all Burmese generals are in believe that cemetery, old cemetery or any place of relating dead are of bad luck and misfortune to them. They avoid that place for doing something other than attending funeral. Junta leader Than Shwe never visit and pay homage to National Martyrs Mausoleum not only because he has no clear conscience in front of the tomb of National Hero and Arm-Forces Founder General Aung San (father of Aung San Su Kyi) but also afraid of misfortune will come to him.
When UN Secretary-General Mr. Ban Ki-Moon requesting for convening the meeting with his UN staff and Diplomatic Corps for explaining of his trip in the country, authority not allowed him to do as requested in convenience and regular venues such as Sedona Hotel, where Mr. Ban Ki-Moon is staying or Trader’s Hotel, where most of the UN Offices are residing but give himapermission to do so in Drugs Museum Hall which is notaplace for such kind of event. That Museum was built in the area of old cemetery in Kyantaw, which was only closed down at end of 1997. When Mr. Ban Ki-Moon came to enter that meeting place, authority tried to let him in, not from main gate but from side door. A lot of arguments to be going on for opening of the main gate as that isatechnique always practice by Junta to disturb someone they are not happy with.
Motive of ushering Mr. Ban Ki-Moon from side door is to show Diplomatic and media Corps that they are commanding UN Secretary General to follow their arrangement. But smart aides of Mr. Ban Ki-Moon strongly protest and given ultimatum of cancel the program if not allow to enter from main door. That is the end of struggle and generals gave in.
What all generals are satisfied from above pre-arranged conspiracy is that since Mr. Ban Ki-Moon’s own conference was held in cemetery, he (UN) will never be in success of conducting any activities in Burma. If he entered cemetery from side door means he (UN) will never be in main but sideline person/Org. That is what all half crack Generals believed.
We, Burmese people really appreciate what was tried to achieve by Mr. Ban Ki-Moon. We have no doubt about his intention and people of Burma are expecting to see the progress but we all are very disappointed and shame for what Junta was done to Mr. Ban Ki-Moon.
Some remarkable incident was occurred when Mr. Ban Ki-Moon was in Nay-Pyi-Taw. Authority arranges some entertainment program for Mr. Ban Ki-Moon and proudly informs him of what is in the program. Mr. Ban Ki-Moon bitterly refused to accept and retorted that he is not come here to enjoy the entertainment but to work for Burma.
Departing Burma and immediately after disembarking from aircraft in Bangkok, Mr. Ban Ki-Moon talk to reporters in waiting before starting formal press conference that during his two meeting with Senior General Than Shwe, most repeated promise he ever listen from him was that Junta will transfer the administrative power to civilian in 2010, then Mr. Ban Ki-Moon pause, smile and talk that if he hasachance to see Senior General Than Shwe again in 2010, then he believes to see S.G. Than Shwe asacivilian.
We, all Burmese applaud and tribute the smart act of Mr. Ban Ki-Moon, who return the good lesson to uneducated Generals. Anyway, we all Burmese people, enthusiastically respecting of Human Right and Democracy, are overwhelmingly supporting Mr. Ban Ki-Moon for his Burma Achievement.
Posted by ကိုထိုက် at 11:39
Very sad when our customs are rubbished by ignorance.
Butameeting atacemetery is not bad, it means going beyond toabetter place, death is good as we are set free, in this case Mr Ban Ki Moon is around the living for many years to come, he is healthy, he is intelligent and he is successful... back door or front door would make no difference whenaman of good is divinely protected.
If we allow superstitious to rule our lives most of us would be underground by now... we learn that we are people who ownabrain to make decisions.
In Burma exists what we know as "karma" and in the westasimple translation would be "return to sender 10 times more", both mean the same.
What goes out must come back, the generals planned and sent it toaMan of Peace, we just have to sit and wait for the right time to witness how the tower falls down beyond repairs, two pagodas and right now the generals are facing crisis, the ethnic borders are not successful, friendly liaisons with nuclears, and you know more than I.
I frankly feel Mr Ban Ki Moon has succeeded and is well protected from the generals dirty superstitious.
Let's wish Mr Ban Ki Moon success and wellbeing, he is well, I know that...
Let worries take over the generals, and let's concentrate on what is more important, how to succeed in achieving FREEDOM for Burma...
the difference with death is;
a good person's passing onto the next life is smooth usually during sleep...
ill people like the generals, death becomesapainful struggle, look at the generals, they are just ambulant medical journals, to live guided by superstition, they have to be very unhappy with their lives.
McCain blasts Aseans...